Hubble ayaa kaliya laga helay uumiga biyaha agagaarka bannaanka fog - BGR - WAA KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SAYNISKA Hubble waxaay ogaataa uumiga biyaha agagaaraha qashin-qubka fog - BGR
Hubble ayaa kaliya laga helay uumiga biyaha agagaarka Exoplanet fog - BGR
Baadi goobka ay ugu jiraan nolosha ka baxsan Dunida, baarayaasheeda barta cilmiga baadiyaha fog waxay raadinayaan waxyaabo muhiim ah. Bilowga, meeraha waa inuu u dhawaadaa xiddigihiisa martida loo yahay si uu u helo kuleyl ku filan, laakiin aad uga fogaa in uusan karkarin. Marka labaad, sidoo kale waa muhiim in la ogaado jiritaanka biyaha taas oo, aqoonteenna, ay muhiim ugu tahay nolosha oo dhan.
Inta badan saynisyahannada diyaarka u ah waxyaabaha loo yaqaan 'exoplanets' waa kuwo aad u kulul ama aad u qabow, ama kubbado waaweyn oo gaas ah. oo aan lahayn dusha cad. K2-18b way ka duwan tahay aragtida iyo qalabka fiirsashada ee Hubble Space Telescope waxay soo jeedineysaa inaysan ahayn kaliya masaafada saxda ah ee xiddiggeedu, laakiin ay tahay waxaa ku jira uumiga biyaha jawigiisa . Waa wax aad u weyn.
K2-18b wuxuu ku nool yahay waxa loo malaynayo inuu yahay aag degaan oo ay ku habboon tahay xiddiggeedu, laakiin marka laga reebo taas, dunidu waxay umuuqataa inay waxyar ka duwan tahay Dunida. Waa meeraha dhagax weyn leh, sidayadayada oo kale, laakiin way ka ballaadhan tahay, oo ay ku dhowdahay sideed jeer baaxaddeeda. Natiijo ahaan, meeraha ayaa soo jiidata jiidasho xoog leh oo xoog leh.
In maqaal cusub lagu daabacay Nature Astronomy Baarayaasha waxaay sharaxeen in iftiinka maraya jawiga meeraha uu bixinayo tilmaamo ku saabsan waxa kujira. Iyadoo la adeegsanaayo xogta laga soo aruuriyay 2016, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay go'aamiyaan in jawiga meeraha ay kujiraan uumiga biyaha iyo sidoo kale hydrogen iyo helium.
Biyo, heerkul macquul ah iyo jawi ku habboon ayaa ah saddexda shay oo ay saynisyahannadu ku raadinayaan kor. inta hartay oo dhan oo raadinaya adduunyo la degi karo. Si kastaba ha noqotee, waxaa weli jira su'aalo culus oo ku saabsan K2-18b, gaar ahaan haddii xiddiggiisa aadka u daran ee casaanka ah ay ku dhufteen meeraha shucaac aad u badan si ay ugu oggolaadaan nolosha inay xidid noqoto.
Fogaanta dhulka illaa qiyaastii nalalka 110-sano, waxay uga dhowdahay goobo badan oo cirka habeenka ah, laakiin weli aad bay noogu adag tahay inaan wax uun qabanno laakiin aan ku eegno si aan ugu faraxsanaano. Maaddaama cilmu-nafleyda ay sii wadayaan raadinta adduunyo suuraggal ah, waxaan baran doonnaa wax badan oo kusaabsan waxa loola jeedo inay runtii tahay "Dhul-la mid", laakiin waqtigaan la joogo, K2-18b ayaa ka dhow kuwa kale badankood.
Isha Sawirka: ESA / Hubble, M. Kornmesser